पारिश्रमिकमा होइन, प्रतिशतमा काम किन नगर्ने ? – Mero Film
पारिश्रमिकमा होइन, प्रतिशतमा काम किन नगर्ने ?
- दिक्षा कट्टेल
नेपाली फिल्ममा अहिले पैसा नकमाउने मान्छे को ? सजिलै जवाफ दिन सकिन्छ, निर्माता । फिल्म बनाउनेले नै पैसा कमाउन नसक्ने हो भने लगानी कसले गरिदिन्छ ? कसले यो फिल्ममा काम गर्ने हजारौलाई बचाउँछ त ?
फिल्ममा अहिले सबैले रकम कमाएका छन् । हिरो हिरोइन देखि अरु विधामा काम गर्ने सबैले रकम कमाएका छैनन् त ? जति कमाएका छन् कमाएका त छन् । किनकी, फिल्म हलमा आउनुभन्दा अगाडि सम्ममा नै सबैजनाले आफ्नो पारिश्रमिक पाइसकेका हुन्छन् । तर, फिल्म हलमा आएर पनि नचलेपछि डुब्ने भनेको निर्माता हो ।
यही भएर पनि निर्मातालाई बचाउन सकिएन भने फिल्म कसरी बाच्ला ?
लगानी गरिदिने मानिस आएपछि पो कस्तो फिल्म बनाउने, कसलाई कती दिने, को स्टार भन्ने बहस हुन्छ । तर, अहिले सबैजना स्टारको डंका पिटेर तिनै निर्मातालाई मारिरहेका छन् ।
फिल्ममा अब नयाँ शैली अपनाउन जरुरी छ कि छैन ? फिल्म बनाउनेलाई बचाउनतर्फ सोच्न कलाकारदेखि वितरकसम्म लाग्ने कि नलाग्ने ? अब फिल्ममा लगानी गर्ने मानिसलाई सुरक्षित बनाउन सबैले शेयरमा किन काम नगर्ने ?
फिल्म नाफामा गयो भने मात्र कलाकारले नाफाको शेयर, निर्देशकदेखि सबैले शेयर लिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि सकिदैन ? केही समयका लागि फिल्म क्षेत्रमा यो काम गर्न जरुरी छ । फिल्म नचले कसैले पनि पैसा कमाएनन्, चल्यो भने सबैले कमाए । कम्तीमा पनि ५ देखि ७ लाख भन्दा माथि पारिश्रमिक लिनेहरुले अब शेयरमा काम गर्न आवश्यक छ । केही समय यो तरिका अपनाउने हो भने फिल्म क्षेत्रमा एउटै व्यक्ति मात्र मर्दैन ।
फिल्ममा अर्को शैलीको पनि विकास हुन जरुरी छ । बलिउडमा फिल्म चल्नु अघि नै वितरकले प्रत्येक शहरका लागि फिल्म किनिसकेका हुन्छन् । वितरकले करोडौ लगानी लगाएर प्रत्येक हलमा फिल्म फिक्समा वेच्दा निर्माता त बाच्छ नै घाटा भैहाल्यो भने पनि वितरक र हल संचालक ठूलो घाटामा जाँदैनन् । अब, नेपालमा पनि यो प्रथा किन सुरु नगर्ने ? वितरकले हिन्दी सिफिल्मलाई २–३ करोड जोखिम मोलेर नेपाल ल्याउँछन् र नेपाली फिल्ममाथि नै हान्छन् । तीनै वितरक निर्मातासँग ५ देखि १५ प्रतिशत शेयर लिएर वितरण मात्र किन गर्छन् ? के उनीहरुले फिल्मलाई फिक्समा किन्न सक्दैनन् ? हिन्दी फिल्ममाथि हुने करोडौ लगानी अब नेपाली फिल्ममाथि गर्न सकिदैन ।
फिल्ममा अहिले निर्माता बचाउन जरुरी छ । यसका लागि पारिश्रमिक होइन, शेयरमा काम गर्न आवश्यक छ । दम हुने फिल्मले सबैलाई नाफा दिन्छन्, दम नहुने फिल्मले एउटा व्यक्तिलाई मात्र मार्दैन ।
२०७५ चैत २६ गते १५:५१ मा प्रकाशित
नेपाली फिल्म – बिगतदेखी बर्तमानसम्म
१५ करोड पटक हेरिने पहिलो नेपाली कीर्तिमानी गीत ‘कुटुमा कुटु’
पहिलो मिस नेपाल रुबी राणा लेख्छिन: जुन आजसम्म पनि रहस्य नै…
१ बर्ष अगाडिकै अवस्थामा देखियो फिल्म क्षेत्र ?
कोमल वलीको ‘ऐच्यै चत्तेरी’ सार्वजनिक (भिडियोसहित)
बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारको पुत्ला जलाइयो !
संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशी अस्पतालबाट डिस्चार्ज
हङकङको फिल्म ‘ह्यान्ड रोल्ड सिगरेट’मा प्रमुख भूमिकामा नेपाली युवक
मनोज गजुरेल बने पर्यटन सद्भाव दूत ‘सिरिजङ्गाको छोरो’
“म केही गर्छु” पाँच मिनेटको फिल्मले २ लाख ५० हजार पुरस्कार पाउने
फिल्म ‘एभरेष्ट’मा इवान म्याकग्रिगरले अभिनय गर्ने